Maqaalka Deb Gabor ee Martech Zone |
Maqaallada by Deb Gabor
Deb Gabor waa qoraaga Calaamadeynta ayaa ah Jinsiga: Macaamiishaada ha la dhigo oo cadaabta ka iibi wax kasta. Iyadu waa aasaasaha Sol Marketing taas oo horseedday istiraatiijiyad istiraatiijiyadeed oo caalami ah oo loogu talagalay ururada laga bilaabo magacyada qoyska ee caalamiga ah sida Dell, Microsoft, iyo NBC Universal, illaa kuwa ku guuleysta dijitaalka sida Allrecipes, Cheezburger, HomeAway iyo RetailMeNot, iyo daraasiin tiknoolajiyad hore iyo dijitaal ah titanada warbaahinta.
Dhamaanteen waxaan dooneynaa taageerayaal daacad ah. Waxaan si joogto ah u raadineynaa qorshaha suuqgeynta sixirka ah ee nagu xiri doona dhagaystayaasheena isla markaana ka dhigaya wax soo saarkeena qayb aan la beddeli karin noloshooda. Waxa inta badan aanan ogaan waa in isku xirnaanta ay yihiin cilaaqaad. Haddii aadan caddeyn cidda aad tahay, qofna dan kama yeelan doono adiga. Waa mid muhiim ah inaad fahanto cidda sumaddaadu tahay, iyo sida ay tahay inaad xiriir ula bilowdo